Maamulka Soomaaliland Oo iclaamiyey xubnaha u metelaya wejiga labbaad ee shirka Turkiga. – Radio Daljir
Maamulka Soomaaliland Oo iclaamiyey xubnaha u metelaya wejiga labbaad ee shirka Turkiga.
Luulyo 6, 2013 2:17 b 0
Hargaysa, 6, 2013-? Maamulka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay xubnihii u meteli lahaa wada haddalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, ee wejigooda labbaad ka dhici doono mar kale dalka Turkiga, halkaasi oo la filayo in uu dhowaan ka furmi doono shirka labbada dhinac.
Maxamed Cabdulaahi Cumar wasiirkii hore ee arimaha debeda ayaa hugaaminaya wefdiga Soomaaliland ee u amba baxay dalka Turkiga, wuxuuse ?sheegay Mudane Cumar in ay sii wadi doonaan wadahadalka labbada dhinac ee la balansan yahay.
? Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa u socda sida aad ogtihiin kulamo u dhexeeya oo noocyo badan leh, dhowr jeer oo hore ayaa la kulmay, hadda waa markii labbaad oo lagu kulmayo Turkiga waxaan leenahay mowqif adag? ayuu yiri Maxamed Cabdulahi Cumar wasiirkii hore ee arimaha debeda ee Soomaaliland.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhowaan isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada iyadoo xubno qeyb ka ahaa shirarkii hore ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay xilkoodii waayeen, Faysal Cali waraabe oo ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa haatan aan ka dhex muuqan wejiga labbaad ee wada haddalka Dowlada iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Garoowe Oo lagaga dhawaaqay guddi dhaqaale u aruurinaya dhaawacyada laga keenay Jubbaland.
Galguduud:- adkaynta amniga oo lagu heshiiyey, iyo dhir jarista oo go,aan adag laga gaaray.